बैंकहरुबाट कसरी भयो निक्षेप गायव ? बैशाखको सिडी ८५%
ARCHIVE, BANKING » बैंकहरुबाट कसरी भयो निक्षेप गायव ? बैशाखको सिडी ८५%
काठमाडौं - सरकारले विकास खर्च बढाउँदै लगेको बताइरहँदा बैकहरुबाट निक्षेप भने हराउन थालेको छ । निक्षेप हराउन थालेपछि बैंकहरुले १४ प्रतिशतमा संस्थागत निक्षेपकर्तासँग पैसा उठाउन थालेका छन्। बाणिज्य बैंकहरुसँग रहेको निक्षेप ३ अर्ब रुपैयाँले घटेको घट्दा लगानी दुई अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। बैंकहरुले ऋण १६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएका छन।
साना र नयाँ बैंक तरलता अभावमा जुधिरहँदा समेत राम्रै अवस्थामा रहेका केही ठूला बैंकहरुलाई यो साता भने अप्ठेरो परेको छ। उनीहरुले पनि महँगो ब्याजमा संस्थागत निक्षेपकर्तासँग पैसा उठाएका छन्। निक्षेप बढ्न नसक्दा बैकहरुको कर्जा-निक्षेप अनुपात सिडी रेसियो बढिरहेको छ।
प्रकाशित : Wednesday, May 31, 2017
Tags : ARCHIVE, BANKING